Dowlada Kenya Oo Albaabada ka xiratay Qoysas ka barakacay Dagaaladii Dhoobley – SBC
Dowlada Kenya Oo Albaabada ka xiratay Qoysas ka barakacay Dagaaladii Dhoobley
Dadkii ka barakacay xiisado dagaal oo maalmihii ugu dambeeyay ka jiray degmada Dhoobley ee gobolkaasi Jubada hoose ayaa lagu soo waramayaa in ay xaalad nololed oo aad u liidaha ku heysato xadka kala qeybiya Kenya iyo Soomaaliya.
Dadkan ayaa goobtaasi ku xayiran maadaama dowlada Dalka Kenya ay ku dhawaaqday in ay xirtay Xadkii ay la laheyd deegaanadaaasi.
Dadkan ayaa halkaasi ku qulqulayay Maalmihii ugu dambeeyay iyagoona qaab barakac ah u doonayay in u gudbaan gudaha xadka dalka kenya uu la wadaago Dalkan Soomaaliya balse iminka ay ku xayiran yihiin halkaasi .
Dagaalo soconayay Maalmihii ugu dambeeyay ayaa ay dadkani ka soo carareen waxaana ay u badan yihiin haween iyo caruur iyo weliba dad da’ ah.
Ciidamada Dowlada KMG ah iyo xoogaga xarakada Alshabaab almujaahidiin ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamay gudaha degmada dhoobley kaas oo dhaliyay khasaare naf iyo maalba leh iyadoona ku qasbay in dadka deegaanka ay halkaasi isaga barakacaan.
Sikastaba ha ahaatee dowlada Dalka kenya ayaa ku dhawaaqday in ay xirtay xuduudeeda islaamarkaana ciidan soo dhoobtay xadka labada dal, taasina waxay ka dambeysay dagaalada ka socda gobolka ay xadka la wadaagto ee Jubada hoose.